Kutengeswa kwezvinhu kubva kuRussia
Kutumirwa kubva kuRussia
Basa reApteka.Hurumende inopa rubatsiro rwekutenga uye kutakura zvinhu zvezvokurapa uye kwete chete kubva kuvashambadzi veRussia nemashamba. Kuendeswa kwezvimwe zvigadzirwa zvekushandisa iwe pachako kubva kuRussia. Kutenga kunowanikwa mumapromasi ehurumende uye mabhizimisi epaIndaneti, uyewo zvakananga kubva kune vanogadzira. Kutumira kunoitwa nemakambani anotakura kubva kuZurich, Hong Kong. Mail broker broker services. Kutenga kunogadzirwa neSwitzerland kambani inobvumirwa kutengesa zvinodhaka munyika yose.
Iwe unogona kuva nechokwadi cheRussia yehutano hwezvinodhaka zvinodhaka nemavhitamini.
Zvisingabviri kukurumidza - zvakatowanikwa mumutengo wezvinhu.
Kuratidza kutakura pasi rose kubva ku12 kusvika ku48 maziso kubva pazuva raakatenga. Zvakatarwa mumwe nomumwe, zvichienderana neunofamba.
1. Kuwanda kwezvinhu zvekushandisa pachedu chete (kwete kupfuura 5 pakatari yezita rimwe)
2. Chengetedza mitemo yemitemo nemiganhu yenyika yako, kana chikamu chacho chisingapfuuri netsika, inodzorerwa uye iwe unodzorerwa.
Kuendeswa kuEurope. Kutumira mapeji kubva kuZurich, Berlin neMilan.
Kuendeswa kunyika dzeAsia, Australia, New Zealand: Kutumira mapurisa kubva kuHong Kong.
Kuendeswa kuU.SA neCanada. Kutumira United States kubva kuNew York.
Kuendeswa kuAfrica, South America, Mexico yakagadzirwa neEEMS.
Nekubatsirwa kweApteka.Hurumende yebasa, unogona kuraira michina kubva kuma pharmacy muRussia. Mukuwedzera kune yakarongwa yakatarwa, unogona kuraira chero zvimwe zvinhu zvakabatana zvine chokuita nekushandisa kwako zvisingagoni kutengwa munyika yako.
Kwete kununurwa: zvinhu zvine zvinhu zvakarambidzwa kutengeswa nemitemo yenyika yako. Usati warayira, chengetedza mitemo yemitemo yenyika yako. Kuendeswa kwemasimusi akawandisa uye mapurisa akawandisa kupfuura 1kg. inofunga zvakanyanya.
Kana iwe uine mibvunzo yakawedzera kana uine sangano rekubatirana, nyora kune info@apteka.social
Heino bhuku rezvigadzirwa kubva kuRussia
Kutengeswa kwezvinhu kubva kuRussia nokuda kwebasa rako pachako.
Iwe unotenga chete muma pharmacies ane hurumende muRussia.
Catalogue yezvinhu kubva kuRussia
Kutenga muma Pharmacy nevashambadzi.
© 2017-2019. Miti yehutano kubva kuRussia Apteka.social